बढ्यो सुनको मूल्य, आज कति छ तोलामा ? « Lokpath
२०७७, २८ पुष मंगलवार ११:०२
बढ्यो सुनको मूल्य, आज कति छ तोलामा ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २८ पुष मंगलवार ११:०२
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलवार (आज) सुनको मूल्य तोलामा ६ सयले बृद्धि भएको छ ।
सोमवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९२ हजार २ सय रहेको थियो । आज मूल्य बृद्धि भइ प्रतितोला सुन ९२ हजार ८ कायम भइ कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९२ हजार ३ सय रहेको छ ।
सोमवारको तुलनामा आज प्रतितोला चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । सोमवार प्रतितोला चाँदीको मूल्य १ हजार २ सय ३० रहेकोमा आज मूल्य बृद्धि भइ चाँदी १२ सय ५० प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
चितवनमा विकास बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च
चितवन । जिल्लामा विकास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेट अपेक्षाकृत रुपमा खर्च
नागरिक स्टक डिलर कम्पनीले पायो कारोबारको अनुमति
काठमाडौं । नागरिक स्टक डिलर कम्पनीले कारोबार अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा नख्खु क्षेत्रमा ‘क्यूआर’ मार्फत् नगदरहित कारोबारको शुरुवात
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ललितपुर जिल्लाको नख्खु
भायानेटले ल्यायो ईएमआई अफर, यस्ता छन् फाइदाहरु
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायानेटले ग्राहकहरुलाई किफायती मूल्यमा उत्कृष्ट इन्टरनेट प्रदान
हरिणीको मृत्युले शोकमा डुब्यो हरिण (भिडियो)
तान्त्रिकको तन्त्र: छोराको मृत्यु नहुने भन्दै ७ लाखमा किने ४…
विवाहपछि युवतीमा देखिने ७ परिवर्तन
नापी निरीक्षकद्वय घुससहित पक्राउ
नेकपा विभाजनको ‘साइड इफेक्ट’: सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार अलमलमा
ह्वेलले गरेको उल्टीले चम्कियो माझीको भाग्य, रातारात बने
चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओ १ लाख ३९ हजारलाई, नपर्नेलाई
ट्रम्प र मेलानियालाई आजीवन सुरक्षा दिइने
बुबा बन्दा धेरै बिदा पाइने यी ५ देश
के अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छाले परमाणु बटन दबाउन